श्रद्धा सुमन कमरेड मदन भण्डारी ! | Ratopati
मदन भण्डारीले कोरेको लक्ष्मण रेखामा टिक्न नसकेको ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’
personटंक कार्की exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ३, २०७७ chat_bubble_outline0
पुँजीवादी प्रजातन्त्रका ‘रूप पक्ष’लाई ‘क्रान्तिकारी सार’मा कलमी गरे । बहुदलीय प्रणाली, कानुनी शासन, मानव अधिकार, शक्तिको प्राथमिकीकरण जस्ता विषयलाई ‘क्रान्तिकारी जनसत्ता, मिश्रित अर्थतन्त्र र आधुनिक संस्कृति’ निर्माणमा सजाए । त्यसलाई उनले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’मा लिपिबद्ध गरे । तर त्यसपछि उनले त्यति मौकै पाएनन् । पार्टीका अर्का नेता जीवराज आश्रितसहित उनको रहस्यपूर्ण हत्या गरियो ।
त्यसपछिका झन्डै ३ दशक गुज्रेका छन् । मदनको अवसानपछि मदनले कोरेको लक्षमण रेखामा कम्युनिस्ट आन्दोलन टिक्न सकेन । यो दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचलन र उग्र वामपन्थी भड्कावको तानातानमा पर्यो ।
दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचलनले उग्र वामपन्थी भड्कावको निम्ति वारुद तयार गरिदियो भने उग्र वामपन्थी भाडकावले दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचलनलाई खोर बाख्री खोर गर्यो । मदन भण्डारीलाई उनका आलोचकले भन्दा पनि उनका खाँटी अनुयायी हुँ भन्नेहरुले आफ्नो विचलनलाई छोपछाप पार्न विकृत रूपमा प्रस्तुत गरे । देख्नलाई तिनको ‘देवपुजन’ त देखिन्छ तर ‘उनको आत्मा’ कहिले पोलेर खाए, खाए !
यो त्यति बेलैदेखि सुरु भयो जब तिनले उनको ‘बहुदलीय जनवाद’को ‘रुप पक्ष’लाई सिद्धान्तको सार र सास्वत पक्ष भनेर भाष्य बाढ्न थाले । अर्को दुखद् पक्ष यस बीचमा उग्रवामपन्थी भड्कावले पनि सम्यक पाठ सिक्न सकेन । सुखद् कुरा, यस आन्दोलनका दुई ठूला धार एकीकृत भएर मूलधार बनेका छन् । यो अहिले सत्तासीन शक्ति त छँदै छ तर आफैभित्र भने उद्विग्न र उद्वेलित पनि छ । सम्यक ‘प्रज्ञा’ र सम्यक ‘साधना’को निम्ति पनि । त्यसको निम्ति सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत विधिको ‘धर्म’ अनुसरण गर्नु मात्रै उत्तम उपाय हो । मदन भण्डारीको स्मृति यसर्थ पनि विशेष अर्थ राख्छ ।
(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)